Annaga nagu saabsan - GTMSMART Machinery Co., Ltd.
Hal qayb oo ka mid ah GTMSMART Machinery Co., Ltd. waa shirkad tignoolajiyada sare leh oo isku xidha R&D, wax soo saarka, iibka iyo adeega. Alaabadayada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah mishiinada Thermoforming, Mashiinka kulaylka caagga ah iyo Mashiinka Kuleyliyaha Koobabka,Mashiinka samaynta faakuumka warshadaha, Mashiinka samaynta koob warqad ah, Makiinada samaynta baaquli warqad, Mashiinka samaynta saxan warqad iwm.
Waxaan si buuxda u hirgelineynaa nidaamka maaraynta ISO9001 waxaanan si adag ula soconaa habka wax soo saarka oo dhan. Dhammaan shaqaaluhu waa inay qaataan tababar xirfadeed kahor shaqada. Nidaam kasta oo habayn iyo isku-ururin kastaa wuxuu leeyahay heerar farsamo oo saynis ah oo adag. Kooxda wax soo saarka ee heer sare ah iyo nidaam tayo leh oo dhamaystiran ayaa hubiya saxnaanta farsamaynta iyo isu-ururinta, iyo sidoo kale xasiloonida iyo kalsoonida wax soo saarka.
GTM waxay leedahay koox farsamo oo xirfad leh oo u heellan cilmi-baarista, horumarinta, iyo soo-saarka waxtarka-sare leh, tamarta-badbaadinta iyo extrusion balaastigga ah iyo qalabaynta la xiriira. Waxay siin kartaa macaamiisha adeegyo dhammaystiran oo fikir leh: oo ay ku jiraan naqshadaynta mashiinka iyo caaryada iyo wax soo saarka, rakibidda iyo hawlgelinta, tababarka shaqaalaha, iwm, oo ay ku gudbeen shahaadada badbaadada CE.
Waxaan ku saleysannahay ruuxa raadinta runta xaqiiqooyinka iyo habdhaqanka dadaalka loogu talagalay heer sare, fiiro gaar ah u yeelo isbeddelka horumarinta mashiinnada baakadaha caagga ah, isku darka tignoolajiyada wax soo saarka sare ee mashiinnada baakadaha caagga ah ee guriga iyo dibadda iyo baahida macaamiisha, oo aan ku dadaalno in aan macaamiisheena siino mashiinka baakadaha balaastiga ah ee ugu tayada sarreeya iyo alaabta qalabka; Xalka ugu fiican iyo iibka kahor ee dhamaystiran, iibka, adeega iibka kadib iyo taageerada.
Macaamiishayada (Alaabooyinka ku jira goobta macaamiisha)